Yan Aung: April 2009
ဒီလိုနဲ့ မန်းမြေမှာ ကျွန်တော် လေးနှစ်တာ နေခဲ့ပါတယ်.
သိတဲ့အတိုင်းပဲ ပထမဦးဆုံးနှစ်မှာတော့ လာခေါ်မယ့် အစ်ကိုကြီးကိုစောင့်ရင်း မပေါ်လာရာက ရှက်သွေးမွှန်ပြီး သင်္ကြန်ဆို ဘယ်တော့မှ ကားနဲ့ မလည်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လေ.
နောက်နှစ်ကျတော့ ကိုယ့်ကတိအတိုင်း ကားနဲ့ မလည်ဘူး.
စက်ဘီးလေးနဲ့ လည်တယ်. ဘာရမလဲ...
ဩော်... သိတယ်... မေးတော့မယ်ဆိုတာ.
ငုဝါနဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်လဲ ဟုတ်လား...
အင်း... ကျွန်တော် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောပြခွင့်ရရင် ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာ
သူလည်း ဘယ်ဆီနေတယ်မသိ. ကျွန်တော်လည်း ငုဝါခြောက်လို့ ပိတောက်ဆီ စိတ်ရောက်. ပိတောက်ပျောက်တော့ အခြောက်ဆီရောက်... အဲလေ... မွှားကုန်ပြီဗျာ...
ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်လည်း အလုပ်တွေများပြီး သမီးရည်းစားကိစ္စတွေ ခေါင်းထဲမထည့်နိုင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ. အဲဒါပါပဲနော်...
ကဲ. တစ်နှစ်စာ ထပ်ပြီး စကစ်(ပ်)လိုက်မယ်.
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နှစ် သင်္ကြန်ချိန်ခါ ရောက်လာပြန်ပါပေါ့ကလား....
မန္တလေး မဟာသင်္ကြန်လို့ ခေါ်ကြတဲ့နှစ်ပေါ့...
မဟာသင်္ကြန်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုပဲ အကြီးအကျယ်ကို ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ထားကြပါတယ်.
မဏ္ဍပ်ကြီးတွေများ ဟီးနေတာပဲ. အဲဒီ့တုန်းက နာမည်အကြီးဆုံး မဏ္ဍပ်ကတော့ လန်ဒန်ပေါ့ဗျာ.
ကြီးဆို သူကလည်း နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေကိုပဲ ငှားတာလေ... သင်္ကြန်လည်းလည်ရင်း တီးဝိုင်းလည်းကြည့်ရတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးလား...
ပြီးတော့ အိုင်စီကိုလေးဖြူတို့ကို ငှားရတာကလည်း မလွယ်လှဘူး... ကိုလေးဖြူကို များသောအားဖြင့် တောင်ကြီးဖက်က လာလာ မသွားကြတာ များတယ်. အဲဒီ့နှစ်ကတော့ ကိုလေးဖြူကို ကျွန်တော်တို့ရလိုက်ကြတယ်.
ဟာ... ဟေ့ကောင်... လေးဖြူလာမှာကွ.
ဟယ်... သိလား... ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဒီမဏ္ဍပ်မှာ ထိုင်မှာတဲ့...
အင်း.... ပရိသတ်ကတော့ ကိုလေးဖြူတို့ ကိုမျိုးကြီးတို့ ဆိုတာထက် အဲဒီ့နှစ် သင်္ကြန်မှာ ကျွန်တော့်ပိတောက်ပန်းလေးတွေ ပန်ဆင်သူ ပေါ်လေလား မပေါ်လေလားကိုပဲ ပိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်. (ထင်တာပဲလေ. သိဘူး.)
အဲဒီ့နှစ်က တရုတ်တန်းနားက ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်မှာ ကျွန်တော်ပိတောက်တစ်ခက် ရခဲ့တယ်. ပြီးတော့ သူမအတွက် ပန်ဆင်လေဖို့ သေချာရည်စူးပြီး အမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်.
အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ ဖိနပ်တောင်မချွတ်ရသေးခင် အမြန်ပြောလိုက်မိတယ်.
"မားသားကြီး... ရော့... ဒီမှာ ပိတောက်ပန်းတွေ ခူးလာခဲ့တယ်."
ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ. ကျွန်တော်နဲ့ ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့နဲ့ လျှောက်သွားတယ်. မုန့်စားတယ်. တီးဝိုင်းကြည့်တယ်. နေ့ခင်းဖက် ပြန်နားတယ်. ညနေဖက် ပြန်ထွက်တယ်. ညဖက် တီးဝိုင်းတွေ လိုက်ကြည့်တယ်. မြို့တော်ခန်းမရှေ့က မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ကြီးရှေ့မှာ တပ်စွဲပြီး လာသမျှ အလှပြကားတွေရော၊ ကားတွေပေါ်က အလှမယ်လေးတွေကိုရော. အကုန်ထိုင်ငမ်းပစ်တယ်. အဲလေ... ထိုင်ကြည့်ပစ်တယ်လို့ ပြောတာ.
ကျုံးဖက်ကို မျက်နှာမူပြီး ဆောက်ထားတဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့က မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ကြီးရှေ့မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် ဗယာကြော်စားပြီး ငြိမ့်နေပါတယ်.
သိတယ်မဟုတ်လား.. ဟို ဗယာကြော်သေးသေးလေးတွေလေ....
အဲဒီ့ဗယာကြော်ရောင်းတဲ့ ကုလားကလည်း သိပ်လည်တယ်. လူတွေများတဲ့နေရာနားရောက်ရင် လေညာမှာ နေရာယူတယ်.
ပြီးတာနဲ့ သူ့ဗယာကြော်ပိစိကွေးလေးတွေကို ထည့်ထည့်ပြီး ကြော်ပါလေရော...
အနံ့ကလည်း ဘာမွှေးသလဲမမေးနဲ့... ခဏနေရင် သူ့ဘေးနားမှာ လူတွေဝိုင်းကုန်ကြတော့တာပဲ.
စကားမစပ်... ကျွန်တော် ဗယာကြော် သိပ်ကြိုက်တယ်. ဂလု... :)
အဲဒီ့လို ဗယာကြော်လေးစားလိုက်. ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ အအေးလေး သောက်လိုက်၊ မဏ္ဍပ်ကြီးပေါ်ကို လှမ်းလှမ်းရှိုးလိုက်နဲ့ အလုပ်များနေခဲ့တာပေါ့.
ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး. သင်္ကြန်သီချင်းတွေဖွင့်ရင် ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့်တွေက ခဏပဲခံတယ်. ပြီးရင် နားမထောင်ချင်တော့ဘူး. တူးပို့တူးပို့တို့၊ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီးတို့၊ တုံချမ်းချမ်းတို့၊ ဟောတော့တို့ကမှ တကယ် နားထောင်လို့ကောင်းတာ.
အလှပြကားတွေပေါ်က ခြေအိတ်ဖြူလေးတွေ ၀တ်ထားတဲ့ လှပျိုဖြူလေးတွေက ကလိုက်၊ မဏ္ဍပ်ကြီးပေါ်က အဆိုတော်တွေက ဆိုလိုက်နဲ့ အပေးအယူမျှမျှတတလေး တီးဆိုကခုန်နေကြတာ တကယ့်ကိုလှပအေးချမ်းတဲ့ အတာညနေချမ်းလေးပါပဲဗျာ.
အီးးးးး ပြောရင်းနဲ့ မန္တလေးကို တအားလွမ်းသွားပြီဗျာ......
ဗယာကြော်စားပြီး ဗိုက်မ၀သေးတဲ့ ကျွန်တော် ကြက်ဥပြုတ်ထပ်ဝယ်စားဖြစ်ပါတယ်.
ကျုံးဘေးနားမှာ အစီအရီစိုက်ထားတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေရှေ့က လွတ်နေတဲ့ အုတ်ခုံလေးတစ်ခုမှာထိုင်ချပစ်လိုက်ပြီး ကြက်ဥကို အုတ်ခုံလေးနဲ့ အသာခွဲ. ပြီးတာနဲ့ အသားကုန်လွေးတော့တာပဲ.
တစ်ယောက်ယောက် စိုက်ကြည့်နေသလို ခံစားမိတာနဲ့ ခေါင်းကိုမော့လိုက်မိတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အုံးခနဲ မော်တာထုခံလိုက်ရသလို ဗလောင်ဆူသွားခဲ့ရပါတယ်..
အိုဘယ့်. သင်္ကြန် နတ်သမီးလေးရယ်...
ကျွန်တော်တစ်ယောက် ၀ါးနေတဲ့ ကြက်ဥကိုဆက်ဝါးဖို့တောင် သတိခဏမေ့သွားခဲ့ပါတယ်.
ကြောင်စီစီနဲ့ ပြန်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော်သတိဝင်လာပြီး ဖတ်ခနဲ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ပါးစပ်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်တော့ နတ်သမီးလေး အသည်းတွေယားသွားပုံပေါက်တယ်. ခေါင်းလေးငုံ့ပြီးရယ်တယ်.
နောက်တစ်ခေါက် မျက်လုံးချင်း ပြန်အဆုံမှာ ကျွန်တော် သူမကို တစ်ချက်ရယ်ပြလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ညာဖက်မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကို အသာပင့်ပြလိုက်ပါတယ်.
တစ်ဖက်တည်းနော်. တစ်ဖက်တည်း... ဟိုဗျာ. အဲဒီ့အချိန်တုန်းက မင်းသားရန်အောင် ရွှေလီစီးကရက်ကြော်ငြာရိုက်တော့ မျက်ခုံးတစ်ဖက်ပင့်ပြတာ ခင်ဗျားတို့ မှတ်မိကြဦးမလားမသိဘူး. လူတွေ ဘာပြောလဲတော့မသိဘူး. အဲဒီ့ကတည်းက မင်းသားရန်အောင်လည်း ဘာကြော်ငြာပဲ ရိုက်ရိုက် သူ့မျက်ခုံးထူလပိန်းကြီးကို ပင့်ပင့် ပြနေတော့တာပဲ.
ကျွန်တော့်ကိုလည်း မျက်ခုံးကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်ဗျ. မ အသိဆုံးပါ. ဟုတ်တယ်ဟုတ်...
ဟော... ရယ်နေပြီ. ရယ်နေပြီ. ဟတ်ဟတ်. မွ....
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး မျက်ခုံးတစ်ဖက်တည်း ပင့်ကြည့်တာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်. အဲဒါနဲ့ မှန်ရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး ဘယ်ဖက်မျက်ခုံးကို လက်နဲ့ဖိထား. ညာဖက်မျက်ခုံးတစ်ဖက်တည်း ပင့်ခိုင်းကြည့်တယ်. ဘယ်ဖက်ကပါ လိုက်တက်လာပါလေရော... မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ဘယ်ဖက်မျက်ခုံးကို အတင်းဖိထားရင်း ကြွက်သားတွေကို ညာဖက်မျက်ခုံးထဲ အားထည့်ခိုင်းထားလိုက်တယ်. ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော် ဘယ်ရောညာရော မျက်ခုံးတစ်ဖက်တည်း ပင့်တက်လာပါတယ်. အခုတောင် စာရေးရင်းနဲ့ ဟောသလို. ဟောသလို ပင့်ကြည့်နေတာဗျ.
အဲသလိုနဲ့ ခုနက နတ်သမီးလေး ကျွန်တော်နဲ့ မျက်လုံးချင်းအဆုံမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ပတ်လောက်လေ့ကျင့်ထားရတဲ့ Skill ကို အသုံးချလိုက်တယ်. ညာဖက်မျက်ခုံးတစ်ချက် ပင့်ပြလိုက်တယ်. ပြီးတော့ရီဝေေ၀လေး လှမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့.
အမှန်တော့ လုပ်ယူပြီး ကြည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး. တစ်နေကုန်လည်ထားပြီး လူက ပြိုင်းနေပြီ. အလိုလိုကို ကွဲနေတာ. အဲဒီ့မှာ မျက်လုံးကပါ ရီဝေမှုန်မှိုင်းသွားရောဗျ.
သူမ ပါးစပ်လေး အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်.
ကျွန်တော်ကလည်း ဒီနေ့တော့ ငါ့နေ့ပဲ ဆိုပြီး ဘယ်ဖက်မျက်ခုံးကို တစ်ချက် ထပ်ပင့်ပြလိုက်တယ်.
ဘယ်... ညာ... ဘယ်... ညာ ပင့်ပြလိုက်တော့ သူမ ပါးစပ်လေးကို အသာအုပ်ပြီး တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်ပါလေရော...
နောက်မှ ပြန်တွေးမိတယ်. ငါကတော့ ဆက်စီဖြစ်လေမလားဆိုပြီး မျက်ခုံးတွေ ပင့်ပြလိုက်ရတာ. သူက ငါ့ကို လူရွှင်တော် ဦးဆိုနီလို့များ ထင်သွားမလားမသိဘူးလို့...
သိတယ်မဟုတ်လား. ဦးဆိုနီက သူ့ရဲ့ ဖြူဖွေးနေတဲ့ မျက်ခုံးကြီးတွေကို ဘယ်ညာဘယ်ညာ ပင့်ပြရင်း ပြုံးပြုံးကြီး စိုက်ကြည့်တတ်တာကို တီဗွီတွေထဲမှာ ပြပြနေတာပဲလေ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူမနဲ့ ကျွန်တော် အပြုံးလေးတွေ ဖလှယ်ခွင့် ရလိုက်ပါတယ်.
ပြီးတော့ သူမကို ကျွန်တော် လက်ကလေး အသာပြလိုက်ပြီး ကားအောက်ကို ဆင်းခဲ့ဖို့ လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်.
အသံတော့ မကြားရပါဘူး. ခေါင်းယမ်းပြတာပဲတွေ့တာပါ. အသံကတော့ ကိုယ့်ဖာသာ စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းထည့်ကြည့်လိုက်တာ...
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ညစ်သွားပြီး မျက်ခုံးတွေပဲ ထိုင်ပွတ်မိနေတော့တယ်ဗျာ.
ခေါင်းငုံ့ထားပြီး ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ်ကို စိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ခြေဖမိုးဖြူဖြူလေးတစ်စုံ လာရပ်ပါတယ်.
ဒိတ်ခနဲခုန်သွားတဲ့ရင်ကို အသာထိန်းပြီး ဆတ်ခနဲ မော့ကြည့်လိုက်တော့...
ကျွန်တော့်ဘော်ဒါရယ်ပေါ့. ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီး ညှပ်ဖိနပ်စီးလာတယ်မသိဘူး.
"ဟေ့ကောင်... မိန်းဖက်ကိုသွားမလို့... လာထ..."
ဒီလိုနဲ့ နတ်သမီးလေးနဲ့ ကျွန်တော်ဝေးခဲ့ရပြန်တယ်.
အမှန်တော့ နတ်သမီးလေးလည်း ကျွန်တော်မျက်ခုံးပင့်ပြလိုက်ပြီးကတည်းက ကျွန်တော့်ဖက်ကို ပြန်ကြည့်တာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး.
သူ့စိတ်ထဲ ကျွန်တော့်ကို အကြောဆွဲနေတယ်များထင်သွားလားမသိပါဘူးဗျာ...
အိ... အိ... အိ...
မိန်းထဲရောက်တော့မှ အဆောင်သူလေးတွေနဲ့ လမ်းထိပ်က ဂျင်းသုတ်ဆိုင်မှာ... လက်ဖက်ရည်ကြမ်းလေးနဲ့.... ထိုင်ခုံပုလေးနဲ့... သင်္ကြန်လည်ထားလို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ မျက်နှာနုနုလေးပေါ်မှာ ၀ဲကျနေတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေနဲ့... လမ်းထိပ်က အုတ်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ဆိုဖြစ်တဲ့ သံစဉ်အပိုင်းအစလေးတွေနဲ့... လမ်းထောင့်က စွယ်တော်ပင်လေးအောက်မှာ ဆုံဖြစ်ကြတဲ့ အရိပ်လေးနှစ်ခုနဲ့...
အချုပ်တန်းဆရာဖေရယ်.... ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာအလိုက်လေး ခဏလောက် ယူသုံးခွင့်ပြုပါနော်...
(ငိုသံပါကြီးဖြင့် ရယ်နေသည်ဟု မှတ်ရန်)
အားလုံးပဲ ရောက်ရာအရပ်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာ တာသင်္ကြန်ပွဲကို ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေသတည်းးးးးးးးးးးး
သာဓု.... သာဓု.... သာဓု....
(နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ဘုန်းကြီးဝတ်မယ့်သူတွေအတွက် ကြိုပြီး သာဓုခေါ်ပေးထားတာ...)
ဒီပို့စ်ကိုရေးရတာ လက်တင်ညောင်းတာမဟုတ်ဘူး... မျက်ခုံးပါညောင်းတယ်...
စာဖတ်နေရင်း ဒီစာကြောင်းလေးကိုတွေ့လို့ ကျွန်တော် ခေါင်းစားသွားတယ်. အဲဒါကြောင့် ပရိသတ်ကိုပဲ အကူအညီတောင်းရတော့မယ်ဗျာ.
သိပ်မကြာသေးခင်က ရန်ကုန်ကို တစ်နှစ်တစ်ခါ လာလာလည်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ထပ်ပါ. မယားကောင်းကိုရရင် သင်ပျော်ရွှင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး မယားဆိုးကို ရရင်တော့ သင်ဟာ တွေးခေါ်ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာလိမ့်မယ် တဲ့....
ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘာတွေးမိတယ်ထင်လဲ..
"၀ါးးးးးးးးး... That's cool, man!!!!"
ဆိုကရေးတီး ပြောချင်တာက မိန်းမ ယူတာ အရှုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေတာပေါ့...
ဒါပေသိဗျာ. ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တာက ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နေနည်းသိတဲ့ တွေးခေါ်ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်နေတာ.
ကျွန်တော် မ်ိန်းမ မယူချင်သေးဘူး....
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ကြားမိလိုက်သလိုပဲ...
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း စိတ်ကူးတွေယဉ်နေတဲ့ ကျွန်တော် ထိုင်ခုံပေါ်က ပြုတ်ကျတာပဲ ဖြစ်ရမယ်.
အက်.... အက်.... အက်....
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ပြီးလို့ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်တက်မလာတော့ရင် မှတ်ထားလိုက်ကြတော့...
မ ခိုးတဲ့နောက် ကျွန်တော် လိုက်ပြေးပြီလို့...
စကားမစပ်... အိုင်ယောနစ် ဆိုတာ Ironic လို့ ပြောတာ. ရှေ့နောက်မညီတာကို ဆိုလိုတာပေါ့. မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ ၀ိရောဓိလို့ ဆိုရမလားပဲ. နည်းနည်းဆန်းသွားအောင် ဘိုလိုပေးလိုက်တာ.
မ က ပြောတယ်.
အလွမ်းသီချင်းတွေချည်းပဲ နားထောင်မနေနဲ့. ပိုလွမ်းမှာပေါ့တဲ့...
အဲလိုဖြစ်နေရင် ဒီက ဘယ်စိတ်ကောင်းမှာလဲတဲ့...
သင်္ကြန်မှာတော့ ခဏလေး စိတ်ပြေလက်ပျောက် ပျော်ပျော်လေး နေလိုက်ပါဦးနော်...
အရမ်းကို တည်တည်တံ့တံ့ ခန့်ခန့်ညားညားကြီးနဲ့ နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် ချစ်တဲ့ မ စကားကို နားထောင်ရင်း.........
ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဆင်ယင်ပြီး ဖွဲ့နွဲ့သီကုံးထားတဲ့ ပိတောက်မျက်ရည်ကို ခဏရပ်. ဟောဒီ့မှာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ပြောပြရဦးမယ်ဗျ…….
ရွှေပြည်တော်ကြီးနဲ့ ဝေးနေရတာလည်း ကြာညောင်းလှပြီမို့ သိပ်မကြာသေးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်လောက်ထိ ပို့ပစ်လိုက်မိတယ်ဗျာ…
အိုကေ. အတိအကျ ပြောမယ်ဗျာ. နော်
ကျွန်တော် လူပျိုပေါက်ဖြစ်တဲ့ အချိန်တုန်းကပေါ့.
အဟတ်ဟတ်. ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လဲ ဟုတ်လား.
ပြောလိုက်ရင်လည်း ကျွန်တော့် အသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီး တွက်ကြတော့မှာ. စိတ်ညစ်တယ်. မပြောပြန်ရင်လည်း ဘက်ဂရောင်းက ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး.
မန္တလေးကို လေးဖြူ တီးဝိုင်းလာတဲ့နှစ်တုန်းက ကျွန်တော် လူပျိုစဖြစ်တယ်. ဒန့်တန်တန်..
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ လူပျိုဖော်ဝင်စပေါ့ဗျာ.
မယုံမရှိနဲ့. ကျွန်တော် အရမ်းရှက်တတ်တာ.
ဘယ်လောက်ထိအောင် ရှက်လည်းဆိုရင်လေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ရင်တောင် လူတွေများ ငါ့ကို ၀ိုင်းကြည့်နေပြီလားဆိုပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ ရေနွေးကြမ်းတွေ လှိမ့်သောက်၊ တစ်ရှုးပေပါတွေဆွဲထုတ်လိုက် သုတ်လိုက်နဲ့. ပြန်လည်းပြန်ရော စက်ဘီးစီးတာ ဘယ်လိုနေရမှန်းကို မသိဘူး.
အိမ်ရောက်တာနဲ့ အိမ်သာထဲ တန်းပြေးရတော့တာပဲ.
အဲဒီ့ကတည်းက ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်. အရှက်ကို ဗြန်းဗြန်းကွဲတာပဲ ဆိုတဲ့ စကား ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပေါ့.
တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ပြောင်းနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို ၀န်ထမ်းမိသားစုအတွက် ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် သူငယ်ချင်းဆိုတာ အင်မတန်ရှားပါတယ်. နည်းနည်းလေး ခင်မယ် မကြံလိုက်နဲ့ နောက်တစ်နေရာကို ပြောင်းရပြန်ရော.
တော်ရုံတန်ရုံ သိပ်မသိသာပေမယ့် သွားသွားလာလာ လုပ်မယ့်အခါကျရင် တကယ့်ကို ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီမယ့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမရှိတာ သိပ်ကို ဆိုးပါတယ်.
ဒီကြားထဲ ကျွန်တော်က ရှက်တတ်သေးတော့ အဖော်သိပ်မရှိဘူးပေါ့.
မှတ်မိသေးတယ်. မန္တလေး သင်္ကြန်ကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ကြုံကြိုက်မိတုန်းကပေါ့.
မတ်လမှာ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲပြီးတယ်. ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မိတ္ထီလာကနေ မန္တလေးကို ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်. ရောက်တော့ ဟိုးအရင်တုန်းက ခင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေ အစ်ကိုကြီး မိသားစုနဲ့ ပြန်ဆုံတွေ့ဖြစ်တယ်. အဲဒီ့မှာ အဲဒီ့အစ်ကိုကြီးက ကျွန်တော့်ကို အိပ်မက်တွေ ပေးပါလေရော…
‘ညီလေး… အကျနေ့ ကျရင် ကိုယ် မင်းကို ၀င်ခေါ်မယ်. အိမ်မှာစောင့်နေ…’ တဲ့လေ…
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော့်ကို ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အစ်ကိုက သူ့လခလေးထဲက ဖဲ့ပြီး လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးထားတဲ့ တစ်ထည်တည်းသော Guess Jeans ဘောင်းဘီလေးကို ထုတ်ဝတ်၊ မိတ္ထီလာဈေးကြီးထဲက မန္တလေးကို မလာခင် ၀ယ်လာခဲ့တဲ့ Deco တီရှပ် အနီရောင်လေးကို ၀တ်လို့ အိမ်ရှေ့ဝရန်တာကနေ မျှော်နေခဲ့တယ်.
အမေက မေးတယ်. မင်းဟာ သေချာလို့လားတဲ့.
ကျွန်တော်ကလည်း အပိုင်ကို ပြန်ပြောတာပေါ့.
“မနေ့ကပဲ တွေ့လို့ ပြောလိုက်သေးတယ် အမေရ. ကိုဖိုးလုံး သူ့သူငယ်ချင်းတွေကားနဲ့ လာခေါ်မယ် ပြောတယ်.”
အိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်မှာ အ၀ါရောင်လေး၊ အပြာရောင်လေးတွေ ဟိုဒီစုံညီစွာ ပြေးလွှားဆော့ကစား မြူးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ ရွာထိပ်က ကုက္ကိုပင်ကြီးအောက်မှာ.. (အဲလေ. စာဥနဲ့ ရောကုန်ပြီ. အဟတ်)
ကျွန်တော်ကတော့ မြင့်တက်လာတဲ့ နေလုံးကြီးနဲ့အတူ ရင်ဘတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်စွာနဲ့ ၂၉ လမ်းနဲ့ ၈၁ လမ်းထောင့်ကို မျှော်နေမိခဲ့တယ်.
ဆန်နီပစ်ကပ်ကားလေး တစ်စီးလာရင်ပဲ အဲဒါလေးများလား..
အဲဒီ့လိုနဲ့ ကျွန်တော့်ဘကြီးလည်း လုံးပါးပါးခဲ့ရတယ်
မြင့်တက်လာတဲ့ နေလုံးကြီးနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာလည်း ရှက်ရွံ့စိတ်တွေ တလိပ်လိပ်နဲ့ရယ်ပေါ့…
အမေက ကောင်းပါတယ်. မသိချင်ယောင်ပဲ ဆောင်နေခဲ့တယ်.
နေ့ခင်း ၂ နာရီလောက်ကျတော့ အမေကကျွန်တော့်နား လာထိုင်ရင်း ပြောတယ်.
“မင်းဟာ လာမယ်မထင်တော့ပါဘူး သားရယ်. ကိုယ့်ဖာသာ စက်ဘီးနဲ့ လျှောက်ကြည့်ပေါ့” တဲ့..
အမေ အဲလိုပြောလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲဆစ်ခနဲ ခံပြင်းသွားတယ်.
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရက်ကိုလစား၊ လကိုနေစား၊ အဲလေ. လကို နှစ်စားနဲ့ နောက်နှစ်လည်းကျရော ကျွန်တော်တစ်ယောက် ရွှေမန်းသား ပီသလာခဲ့ပါတယ်. (မန္တလေးမြို့သား ပီသလာတာကို ပြောတာဗျ. ရွှေမန်းရဲ့ သားမဟုတ်ဘူး..)
ကျုံးဘေးမှာ ဘယ်အချိန် စက်ဘီးလေးစီးလိုက်ရင် ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ကို ကြည်လင်အေးမြသွားစေမယ်ဆိုတာ….
ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေရှိပြီး ဘာတွေက ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ….
ဟောင်ကောင်စတိုး ဘယ်အချိန်ပိတ်ပြီး ရေနီမြောင်းက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ စီးတယ်ဆိုတာ…
တော်ပါပြီဗျာ. လိုရင်းချုပ်ရရင်တော့ လည်လည်ဝယ်ဝယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်. အပေါင်းအသင်းတွေလည်း များလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ.
အဲဒီ့လိုနဲ့ သင်္ကြန် အကျနေ့ တစ်နေ့မှာ……..
မိတ္ထီလာက ကျွန်တော်နဲ့ ဆယ်တန်းတုန်းက တွဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မန္တလေးသင်္ကြန်ကို တက်လာကြတယ်.
ငယ်ပေါင်းတွေဆိုတော့ ချက်ခနဲဆို ဗိုက်ကလှပ်ပြီးသား. (အဲလေ. နားခွက်က မီးတောက်ပြီးသားလို့ ပြောတာ.) သင်္ကြန်ဆိုတော့ ရေစိုတာနဲ့ ရောကုန်တာ. အဟတ်ဟတ်.
သွားလိုက်ကြတာ. ဟိုး နန်းရှေ့ကနေ ထွက်လိုက်တာ. ဈေးချိုထိ…
ကျွန်တော့်ကောင်တွေက နန်းရှေ့မှာ တည်းကြတယ်. ဘယ်ကျော်သူရလို့ ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာပေါ့. ကျွန်တော်လည်း ရောယောင်ပြီး သူတို့နဲ့ အတူတူ သွားအိပ်၊ သွားစားဖြစ်တယ်.
သင်္ကြန်ဆိုတော့ လူငယ်စကားနဲ့ပဲ ပြောတော့မယ်ဗျာ. နော်.
ငါးညှီရှိရာ ယင်ကောင်လာ ဆိုသလို..
ကျွန်တော်တို့လို တက်သစ်စ လူပျိုပေါက်လေးတွေ တည်းတဲ့နေရာနားမှာ သတင်းတွေက စတင် ပျံ့နှံ့လို့ လာခဲ့ပါတော့တယ်.
‘ဟိုကောင်လေးက MIT ကတဲ့.. ဟို အသားညိုညိုလေးကတော့ ဆေးကျောင်းသား.. ဟိုတစ်ယောက်က မိတ္ထီလာမှာ ဆိုင်ပိုင်တာ. (ကွမ်းယာဆိုင်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့မသိလိုက်ကြဘူး. ဆိုင်ပိုင်တာပဲ သိလိုက်ကြတယ်.) … ဘလာ.. ဘလာ.. ဘလာ… ‘ ပေါ့ဗျာ.
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက် သင်္ကြန်မှာ လည်ဖို့ မိန်းကလေး မိတ်ဆွေ လေးယောက် ရလိုက်ကြတယ်.
ဘုရားစူး တကယ့် မိတ်ဆွေတွေပါ.
နာမည်လေးတွေကတော့ ပြောရင် ကာယကံရှင် ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ပန်းနာမည်လေးတွေပဲ ပေးလိုက်တော့မယ်နော်.
ငုဝါရယ်၊ ပိတောက်ရယ်၊ အင်ကြင်းရယ်၊ ကျွန်းသစ်ရယ်.. (အဲလေ.) မာလာရယ်ပေါ့….
ထိတယ်နော်. ဒီလောက်နာမည်ကြီးပြီး ဆိုင်ကယ်လေးတောင် မစီးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဘ၀…
မြန်မြန်မသွားကောင်းတဲ့ ခရီးတစ်ခုကို ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ သွားရတာကိုက အရသာဆိုတာ အရှေ့ကနေ လျှာထွက်မတတ် စက်ဘီးနင်းနေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်ခဲ့ရတယ်.
ငုဝါက ၀လို့ မဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ကိုက လေဆန်ကို နင်းနေကြလို့ပါ.
ရေစိုလာတဲ့ အ၀တ်လေးတွေကို ကျုံးဘေးမှာ အသာညှစ်ကြ၊
ဘေးနားလာလာရောင်းတဲ့ အသားကင်လေးတွေကို ကိုယ်စီ ဆွဲဖဲ့ကြ၊
မဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ လုံထိန်းတွေ၊ ရဲတွေကို မူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အောက်က မြောင်းပုပ်ရေနဲ့ ကန်၊ ဘွတ်ဖိနပ်တွေနဲ့ တက်နင်းကြ…
ညနေချမ်းမှာ အိမ်ကို ခဏပြန်ပြီး ရေမိုးချိုး. ပြီးတော့ စက်ဘီးလေးနဲ့ ပြန်ထွက်ရင်း တီးဝိုင်းလေးတွေ လိုက်ကြည့်ကြ..
ညမိုးချုပ်တော့ အိမ်ကို တစ်ယောက်တည်း ပြန်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ တစ်ချို့ကို ပြန်လိုက်ပို့ကြနဲ့…
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီ့နှစ်က သင်္ကြန်တစ်ခု လှပစွာ ပြီးဆုံးခဲ့တယ်.
အိပ်ချင်ပြီဗျာ. နောက်နေ့မှ ဆက်ရေးတော့မယ်. ဂွတ်နိုက်…
တကယ်ကြီးကို အိပ်ချင်လို့ပါဗျာ. မနက် အလုပ်သွားရဦးမယ်လေ.
အေးဆေးပေါ့. ဒီနေ့မှ အကျနေ့ပဲ ရှိသေးတာ ဟုတ်.
မြူမှောင်ဝေကင်း သီချင်းလေး နားထောင်ပြီး အိပ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ.
အိပ်မက်ထဲကျမှ မြူမှောင်ဝေကင်းသီချင်းက စတိုင်လ်ပြောင်းပြီး
‘ငုဝါ.. ငုဝါ.. ပန်းခင်းသော လက်အနုပညာ. ငုဝါ. ငုဝါ…’ ဆိုရင်တော့……
အလွမ်းတွေ အပြည့်နဲ့ ကျွန်တော် ဒီစာလေးကို ရေးလိုက်တယ်နော် မ.
တကယ်တမ်း တွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့လည်း ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးလေ. ဒီဘ၀တစ်ခုဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ လူတွေ အချင်းချင်း ချစ်ကြ၊ မုန်းကြ၊ ခင်မင်တွယ်တာကြ၊ မုန်းတီးစက်ဆုပ်ကြ၊ ပျော်ရွှင်ကခုန်ကြ၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးကြနဲ့ ဘ၀ဆိုတာကြီးက တကယ့်ကို ပြဇာတ်ခုံကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ.
အဲဒီ့ပြဇာတ်ခုံကြီးပေါ်မှာပဲ ကျွန်တော် မထင်မှတ်ပဲ မ ကို ခင်မင်တွယ်တာခဲ့ရတယ်.
ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ ကျွန်တော်သိပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ မ ဆိုတာ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း ဘယ်သူမှ မသိကြသေးသလို ကျွန်တော့်ဖက်ကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ဟချပြဖို့ အင်အားမရှိခဲ့ပါဘူး.
တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် ညဖက် မအိပ်ခင် ရေးတတ်တဲ့ စာအုပ်လေးပေါ့
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီဘလော့ဂ်လေးပေါ့.
ဒီဘလော့ဂ်လေးပေါ်မှာ ကျွန်တော် ရေးချပြလို့ရတဲ့ ရင်ဖွင့်သံတစ်ချို့ကို ကဗျာလိုလို၊ စာလိုလို၊ အက်ဆေးလိုလို၊ တိုင်တည်ဖွင့်ဟသလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော် ရေးတတ်၊ ဖွဲ့နွဲ့တတ်တယ်.
ဒါလေးကိုက ကျွန်တော့်ရဲ့ ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့ရတယ် မ ရယ်.
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး. ကျွန်တော် ဒီနေ့ မ ကို သိပ် သတိရနေခဲ့တယ်.
လွမ်းလိုက်တာလို့လည်း ရင်ဘတ်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ တမ်းတဟစ်ကြွေးမိတယ်.
ဒီအချိန်ဆို မတစ်ယောက် ဘာတွေလုပ်နေမယ်. ဘယ်သူတွေနဲ့ ရှိနေမယ်. အို... ကျွန်တော်မတွေးဘဲနဲ့ကို ခေါင်းထဲ ရောက်ရောက်လာတယ်ဗျာ.
ဆန်းဒေးကဆိုရင်လေ ကျွန်တော် အိပ်ယာထဲမှာ ခွေနေရင်း မျက်နှာကြက်ကို မော့ကြည့်လို့ မ အကြောင်းတွေ အများးးးးးးးးကြီး တွေးနေမိတယ်.
ဒီနေ့ သင်္ကြန်ကျပြီနော် မ.
ကျွန်တော် မ ကို ရေလောင်းချင်လိုက်တာ....
မ ရဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးတွေကို အသာသပ်တင်ပြီး ကုပ်လေးပေါ်ကတဆင့် ရေအေးအေးလေးကို လောင်းချလိုက်စဉ်ခဏ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ မတစ်ယောက် ရှက်သွေးဖြာပြီး ခေါင်းငုံ့ရယ်ပြုံးနေမလား.
ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာလေး နီမြန်းနေပြီး ဆံနွယ်လေးတွေကို အသာစုကိုင်ထားမလား.
ဒါမှမဟုတ်. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရယ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ရေပြန်လောင်းဖို့ ကြိုးစားနေမလား...
အဲဒီ့အတွေးစတွေအားလုံးကို မျက်နှာကြက်အဖြူကြီးက ရက်စက်လွန်းစွာ ၀ါးမြိုပစ်လိုက်တယ်.
ကျွန်တော် မ ကို သိပ်ကို လွမ်းနေမိပါတယ်...
အလွမ်းတွေ အပြည့်နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးထဲမှာ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဒီနေ့ မ အတွက် တင်ပေးလိုက်တယ်နော်.
ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး အခန်းအောင်းပြီး နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ မ မျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တယ် မ ရယ်.
ကျွန်တော် ဒီခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာ ထိုင်မိခဲ့ပြန်ပြီ မ ရယ်...
တမြတ်တနိုး ပွတ်သပ်မိရင်း ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောမိတယ်.
ကျွန်တော် မ ကို အရမ်းတွေ့ချင်လိုက်တာ
Ethics တွေ၊ Social Rules တွေ၊ Manner တွေ
ဒါတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်မေ့ထားလိုက်ပြီး
ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လောင်ကျွမ်းပစ်လိုက်ချင်တယ်.
တစ်စုံတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို ပြုံးရင်း စိုက်ကြည့်နေသလိုပဲ.
အာခေါင်တွေကို ခြစ်ကုပ်ပြီး အားကုန် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်.
အသံတွေဟာ ကွဲအက်လို့ လည်ချောင်းဝမှာ ကျဆုံးချိန်မှာ
တစ်စုံတစ်ရာသာ ပြင်ပကို တိုးထွက်လာခဲ့တယ်.
ကျွန်တော် သိပ်လွမ်းတယ် မ....
နွေးထွေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်စတစ်ချို့ကို အေးခဲစေခဲ့တယ်.
မနဲ့ ကျွန်တော့်အကြောင်း စဉ်းစားမိတိုင်း
တစ်စုံတစ်ရာကို ကျွန်တော် အပြင်းအထန်ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ချင်တယ်.
ရှေ့တည့်တည့်မှာ မြင်နေရတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကိုပဲ အားနဲ့ ကျုံးကန်ပစ်လိုက်ရမလား
ခဲလုံးကြီးကြီးကို ဆတ်ခနဲကောက်ပြီး ရေပြင်ထဲကို ၀ုန်းခနဲ ပစ်ထည့်လိုက်ရမလား
မျက်စိကိုစုံမှိတ်၊ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးဖက်ဆန့်တန်း၊ ခေါင်းကိုမော့လို့
'အားးးးးးးးးးးး' ဆိုပြီး ဖောက်ခွဲအော်ဟစ်ပစ်လိုက်ရမလား...
ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေပေါ်မှာ ရေခဲမြစ်တစ်စင်း လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ် မရယ်..
ဒီ့ထက်လည်း ပိုကြေကွဲနိုင်ဖို့ နှလုံးသားမှာ အင်အားမရှိတော့ပါဘူး..
မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ သီချင်းစာသားတစ်ချို့ ခေါင်းထဲ ပြေးဝင်လာကြတယ်.
နှုတ်ခမ်းထောင့်ကို အသာကိုက်ရင်း ခပ်မဲ့မဲ့ ပြုံးမိတယ် မရယ်...
ငါဟာသေဆုံးလို့ ရွက်ကြွေတွေ ဘ၀လို
ညနေခင်းဟာ အရာအားလုံးကို ကျောခိုင်းလို့ မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပြီ
ကမ်းစပ်ကို ရိုက်ခတ်နေတဲ့ ရေလှိုင်းသံတွေကြားထဲမှာ
ဆောက်တည်ရာမရ လွင့်မျောနေတဲ့ ကျွန်တော့်အလွမ်းတွေကို ပြန်ဖမ်းပြီး
ခုံတန်းလျားလေးကို မြတ်နိုးယုယစွာ ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်.
ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်မှ မပြယ်နိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်တစ်ချို့နဲ့
ကျွန်တော်သိပ်မြတ်နိုးတဲ့ သစ်ရွက်လေးတစ်ရွက် တင်ကျန်နေခဲ့တယ်.
ဆစ်ခနဲ ကျင်တက်သွားတဲ့ ဘယ်ဖက်ရင်အုံပေါ်မှာ
အိုင်မစ်စ်ယူ ဆိုးမတ်ခ်ျ မ....
ဒီအချိန်ဆိုရင် မ တစ်ယောက် အရင်လိုပဲ သင်္ကြန်ရောက်ရင် ဘာလုပ်မယ်၊ ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာနဲ့ ရင်ခုန်နေမလား... ဒါမှမဟုတ် သင်္ကြန်ဆိုတာ စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တွေကို ဆေးကြောသင့်တာဆိုပြီး တရားစခန်းဝင်ဖို့ မောင့်ကို အဖော်ညှိနေမလား...
ဘာတွေဘယ်လိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေယဉ်နေခဲ့. မောင်နဲ့မကတော့ ဟိုးးးးးးးအဝေးတစ်နေရာဆီမှာ မဆုံဆည်းနိုင်တဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းတွေကို ကိုယ်စီလျှောက်လှမ်းနေကြဆဲပါလေ...
"မောင်ရေ... ရုံးက ကိုစိုင်းကမေးနေတယ်. သူတို့ ကားငှားထားတယ်တဲ့. တစ်ယောက် ၃၀၀၀ ပေးရမယ်တဲ့. အတက်နေ့ တစ်ရက်ပဲ လည်မှာတဲ့. အဲဒါ မောင် လိုက်မလား..."
ငုံ့စားနေသော တို့ဟူးသုပ်ဖတ်တစ်ဖတ် လမ်းမပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်ကို နှမြောတသစွာ ငေးကြည့်ရင်း သူမကို မော့မကြည့်ဘဲ ပြန်မေးဖြစ်သည်..
"မ သဘောက ဘယ်လိုလဲ..."
"မကတော့ လိုက်ချင်တယ်. တစ်နှစ်မှ တစ်ခါပဲ လည်ရတာ. ပြီးတော့သူများတွေလို စတေ့ခ်ျရှိုးတွေဘာတွေတောင် ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား. အဲဒါ..."
"အဲဒါ" ဟုပြောပြီး ရပ်လိုက်သော သူမ၏ စကားသည် ဘာမှဆက်ပြောစရာမလိုလောက်အောင် အင်အားကောင်းနေခဲ့လေသည်...
ဘူးသီးဟင်းခါးခွက်ထဲသို့ ငရုတ်ကောင်းအနည်းငယ် ဖြူးထည့်လိုက်ပြီး တစ်ဇွန်းမှုတ်သောက်လိုက်သည်...
တစ်ယောက် ၃၀၀၀ ဆိုတော့ နှစ်ယောက် ၆၀၀၀. စားတာသောက်တာနဲ့ဆို ခုနစ်ထောင်၊ ရှစ်ထောင် အသာလေးပဲ. ဟိုနေ့က ကောလိပ်အက်ဆေးရေးနည်း စာအုပ် မိတ္တူဆွဲတာ ၂၅၀၀ ပေးရဦးမယ်. သဘက်ခါ သွားရွေးရမယ်. လကုန်ရင် ပေးရမယ့် SAT Test Registration အတွက် ဒေါ်လာဝယ်ဖို့ ပြည့်ပါ့မလားမသိ...
သူ့ခေါင်းထဲတွင် ကိန်းဂဏန်းပေါင်းများစွာ တွက်ချက်ရင်း အဖြေမထွက်ဘဲ စာရင်းပိတ်ခံလိုက်ကြရသည်. ရင်ဘတ်ထဲသို့ ပူလောင်စွာ စီးဆင်းသွားသော ငရုတ်ကောင်းအရသာကို ခံနေရင်း ရှူးခနဲ လေရှူသွင်းမိသည်... ထို့နောက် စကားတစ်ခွန်းကို ခပ်လေးလေး ပြန်ပြောမိသည်.
"အဟင်း... အဲဒါကြောင့် မောင့်ကိုချစ်နေရတာ..."
သူ၏ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကို သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က အသာရစ်ပတ်ပြီး ညှစ်လိုက်သလို ခံစားမိလိုက်သည်...
သူခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ "အမေ့သား" တို့ဟူးသုပ်သည်ကြီးက သူတို့နှစ်ယောက်အား ပြုံးကြည့်နေခဲ့သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်...
ပိုက်ဆံရှင်းပေးပြီး မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဖက်ထွက်လာခဲ့သည်. သူမ၏ ထမင်းချိုင့်ထည့်သည့် ခြင်းတောင်းလေးကို ကိုင်ထားပြီး နောက်ထပ်ဝင်လာမည့် ၄၅ ဟီးနိုးကားကြီးကို စောင့်နေစဉ် သူမက သူ့လက်မောင်းကို တွဲခိုရင်း တစ်နေ့တာ လုပ်ခဲ့ရသည့် ရုံးလုပ်ငန်းများအကြောင်းကို ပြောပြနေခဲ့လေသည်...
"မနက်ကတော့ အေးဆေးပါပဲ. ရုံးရောက်တော့ ကော်ဖီသောက်တယ်. မောင်ဝယ်ပေးတဲ့ ဟဲလို ပူတင်းပေါင်မုန့်လေး ထုတ်စားတယ်. ပြီးတော့ မနေ့က စာရင်းတွေ ပြန်စစ်တယ်. မဥမ္မာက သူ့တူမလေးအကြောင်းပြောပြလို့ ရယ်နေရသေးတယ်. ဦးဇော်ကလည်း အေးဆေးပါပဲ.. ."
သူဖြတ်မေးလိုက်တော့ သူမခန္ဓာကိုယ်လေး တောင့်ခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားသည်ဟု ထင်လိုက်မိသည်...
"မဆက်ပါဘူး. ဆက်လည်းမကိုင်ဘူး. မရှိဘူးလို့ ပြောခိုင်းထားတယ်."
ရှေ့တည့်တည့်တွင်မြင်နေရသော ဆူးလေဘုရားကြီးကို စိတ်ထဲမှ ကြည်ညိုဦးခိုက်မိရင်း သက်ပြင်းမောတစ်ချက်ကို သူမ မသိအောင် ခိုးချမိသည်....
"... နေ့ခင်းကျတော့ မောင်ရယ်. နေခြည်ပေါ့... အလကားသက်သက် မ ကို လာရစ်တယ်. ဘာမှမဟုတ်ဘူး. အလကား. မကို ဦးဇော်က ဟိုတစ်နေ့က အစည်းအဝေးမှာ စာရင်းဇယားနဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်ချရတယ်လို့ ပြောလို့ သက်သက်ဂျေဖြစ်တာ. မားကတ်တင်းက လုပ်တဲ့ အမှားကို မ တို့ လုပ်တဲ့ စာရင်းမှားပါတယ်ဆိုပြီး မန်နေဂျာကို သွားတိုင်တယ်လေ... မ ကလည်း သိတယ်မဟုတ်လား. ဘာရမလဲ... ... .. "
"ဟိုမှာ ကားလာပြီ. မ..."
၄၅ ကားကြီးက မြို့တော်ခန်းမရှေ့သို့ တိုးဝင်လာခဲ့သည်... ကားဂိတ်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသော ခရီးသည်များက ကားပေါ်မှ လူများမဆင်းခင်ကတည်းက တိုးဝှေ့၍ အပေါ်သို့ တက်ရန် စိုင်းပြင်းနေကြသည်.
ရှေ့ဆုံးသို့ ရောက်အောင် တိုးဝင်ရင်း ကားပေါ်သို့ တိုးဝှေ့တက်လိုက်သည်. ထို့နောက် နှစ်ယောက်ထိုင် ထိုင်ခုံတစ်လုံးရှိရာသို့ ပြေးဝင်လိုက်ပြီး အစွန်ဖက်မှ ပိတ်ထိုင်လိုက်သည်... သူမ၏ ရုံးခြင်းတောင်းလေးကို အတွင်းဖက်မှ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်သည်. လူရှိသည်ဆိုသည့်သဘော...
"သားရေ. ဒါလေး ရှေ့ခုံပေါ်တင်ပေးပါနော်..."
ပြတင်းပေါက်မှ ငုံ့ကြည့်မိလိုက်တော့ အဒေါ်ကြီးတစ်ဦး သူမ၏ အိတ်ကို သူ့ကိုလှမ်းပေးရင်း ထိုင်ခုံနေရာဦးပေးဖို့ လှမ်းပြောနေလေသည်..
ဘာမှမပြောဘဲ အိတ်ကိုဆွဲယူလိုက်ကာ သူ့ရှေ့က ခုံပေါ် အသာတင်ပေးထားလိုက်သည်...
စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်သွားပုံရသော အဒေါ်ကြီးသည် ကားပေါ်သို့ တိုးဝှေ့တက်နေသော လူအုပ်ကြီးကုန်မှ အသာအယာ ကားပေါ်သို့ တက်လာခဲ့လေသည်.
သူမက နောက်မှ အေးဆေးတက်လိုက်လာသည်. သူမ၏ ရုံးခြင်းတောင်းလေးကို သူ့ပေါင်ပေါ်သို့ အသာဆွဲဖယ်၍ တင်လိုက်ပြီး သူမကို အတွင်းသို့ ၀င်ထိုင်စေလိုက်သည်.
သူနေရာဦးပေးထားသော အဒေါ်ကြီး အိတ်ကိုဆွဲယူရင်း နောက်ဖက်လှည့်ကာ သူ့အားကျေးဇူးစကားပြောသည်ကို သူမက ခပ်စ်ိမ်းစိမ်း လှမ်းကြည့်နေခဲ့လေသည်..
"မောင်နေရာဦးပေးထားတာပါ. အောက်ကနေ အိတ်လှမ်းပေးလို့လေ.."
သူလုပ်နေသော အရာမှန်သမျှ သူမ သိရန်လိုအပ်သည်. မသိသေးလျှင်လည်း သိအောင်ပြောရန် သူ့တွင် တာဝန်ရှိနေခဲ့လေသည်.
ထို့နောက် ကားမထွက်ခင်ထိ သူမနှင့်သူ ရောက်တတ်ရာရာများပြောနေခဲ့ကြလေသည်...
တစ်ခါတစ်လေ သူမ တစ်စုံတစ်ရာကို သတိရသွားပြီး သူ့ဖက်ကို ရုတ်ခနဲလှည့်ကာ ပြောတတ်သည်ကလည်း ရှိသေးသည်...
"မောင်နော်... ကောင်မလေးတွေကို စာမသင်ရဘူးလို့ ပြောထားတယ်နော်."
"အင်းပါ... မရယ်... လက်မခံပါဘူး. ယောင်္ကျားလေးတွေပဲ သင်တာပါ."
ထိုသို့ ပြောနေစဉ်မှာပင် သူ့တပည့်မလေးများဖြစ်ကြသော အလုံမှ သန္တာ၊ ကျောက်တံတားမှ ချိုချိုခိုင်၊ စမ်းချောင်းမှ မအေးငြိ်မ်းတို့၏ မျက်နှာလေးများက သူ့စိတ်ကူးထဲတွင် အစီအရီပေါ်လာကြလေသည်...
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် သူ့ပါးစပ်မှ အသံမထွက်ဘဲ ခပ်တိုးတိုးလေး ရေရွတ်မိသည်...
"အရင်လက မအတွက်ပေးလိုက်တဲ့ အဆောင်လခက သန္တာ့ဆီက ရတဲ့ ကျောင်းလခပေါ့ မရယ်..."
ကမ်းနားလမ်းတလျှောက် အရှိန်ဖြင့်မောင်းနှင်လာသော ဘတ်စ်ကားကြီးက ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှ သဘောင်္ကြီးများ၏ ဥဩသံတို့နှင့်အပြိုင် ဟွန်းတပွမ်ပွမ်ပေးလျက် ကျော်တက်မောင်းနှင်လာခဲ့လေသည်..
သိမ်ကြီးဈေးစီရုံကြီးရှေ့ဖက် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းမကြီးအတိုင်း ၄၅ ကားကြီး လှည့်ဝင်လာခဲ့ပြီး မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံရှေ့မှ ဖြတ်တော့ သူမ မျက်နှာ ၀င်းခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားသည်...
ကားပေါ်သို့ တိုးတက်ခဲ့စဉ်က အနည်းငယ်နေရာမှားသွားသော သူ၏ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခါးကြားထဲသို့ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး တင်းကျပ်စွာ ထိုးထည့်မိရင်း ပြန်မေးလိုက်မိသည်...
"ဟုတ်မယ်... လွင်မိုးက ခုတလော ဟာသတွေ အရိုက်များနေတယ်. ပြီးတော့ နန္ဒာလှိုင်ကိုလည်း ကြိုက်တယ်."
"ဆန်းဒေးကို မောင် ဘွတ်ကင်လုပ်ထားပေးမယ်လေ. ဟုတ်ပြီလား. နေ့ခင်းပွဲကြည့်တာပေါ့."
"တကယ်ပြောတာပါဗျာ... ၀ါသနာပါရင် အထဲမှာ ကလို့တောင်ရတယ်... ကဲ. အစ်ကိုကြီးရေ အထဲကို အားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီး၊ ဖိပြီး တိုးပေးပါဗျာ. ငါးမြွေထိုးလေးပေါ့. ဟိုဖက်က မမတို့ကလည်း တွေ့တဲ့ဟာကြီးကို မလွှတ်တမ်းဆုပ်မထားနဲ့. အထဲမှာ ကိုင်စရာတွေ အများကြီး..."
စပယ်ယာ၏ စကားအဆုံးတွင် သူ့ခေါင်းမှ ဆံပင်များပင် ထောင်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်ဟု ခံစားမိလိုက်သည်.
စံပြရုပ်ရှင်ရုံရှေ့သို့ ကားဝင်တော့ လူအုပ်ကြီးက ဖဲ့တော့ရွဲ့တော့မည့်အလား သူတို့ကားကြီးကို ၀ိုင်းလာကြသည်...
"ရဆို ဂိတ်စက စီးတာကိုး မရဲ့.."
"အံမယ်... ဒါတောင် တစ်ခါတစ်လေ မရပါဘူးနော်. ကံကောင်းလို့ရတာ. ပတ်စီးစီးတာပဲ စိတ်အချရဆုံး.."
"ဟုတ်ပါပြီ. မပဲ တို့ဟူးသုပ်စားချင်တယ်ဆိုလို့ ဆူးလေထိ လမ်းလျှောက်တာလေ."
"အင်းပါ. သိပါတယ်. အဲဒါကြောင့် ကံကောင်းလို့ ထိုင်ခုံရတာပါဆို.. မောင်ကလည်း..."
သူ့စိတ်ထဲတွင်မတော့ ဂိတ်စမှ တာလွှတ်လိုက်သည့် ကားပြိုင်ပွဲမှ ကားတစ်စီး ဂိတ်ဆုံးတွင် ဒီပန်းတိုင်သို့ ပြန်ဝင်လာသကဲ့သို့ ခံစားမိလိုက်သည်...
ဘေးဖက်ကို ငဲ့ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှ လွှတ်ခနဲ ပြောချင်ရာ ပြောပစ်လိုက်သည်...
"ရှရွတ်ခန် မဟုတ်ရင် ခံစားလို့မရဘူး..."
သူခေါင်းကိုသာ တဗျင်းဗျင်းကုတ်မိတော့သည်... အိုက်လိုက်သည်မှာလည်း လွန်ပါရော...
(ဆောရီးပါ. အရမ်းအိပ်ချင်လာလို့. ဒီဇာတ်လမ်းက တကယ်ပြီးမှာ. သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ပေါ့. ဟတ်ဟတ်.)
ညီမငယ် မေဒီဇာကတက်ဂ်ပါတယ်. ၀ါသနာတဲ့ဗျာ...
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာတွေလုပ်နေလို့ လုပ်နေမှန်းမသိပေမယ့် တစ်ခြားသူက ပြောပြထောက်ပြလိုက်တော့မှ သတိထားမိတာမျိုးလေးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်ဗျ.
၀ါသနာဆိုတဲ့ပို့စ်လေးကို အာဝဇ္ဖန်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဟာသလေးနှောပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလည်း ရေးချင်တယ်. လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတစ်ချို့နဲ့လည်း တည်တည်တံ့တံ့ရေးချင်တယ်. အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော်စပြီး ခွကျပါတယ်. (ခွကျတာလား. ဂွကျတာလားမသိ.. ကျချင်ရာကျတော့ဗျာ. ပြောချင်တာက ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာ မလူးသာ မလွန့်သာ မလူးလည်းမသာ မလွန့်လည်း မသာ ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ. ဟတ်ဟတ်)
၀ါသနာဆိုတာကို ၀ီကီက ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်.
(၀ါသနာဆိုတာ အားလပ်ချိန်မှာ အပန်းဖြေလုပ်ဆောင်တဲ့ လိုက်စားမှုတစ်ခု တဲ့.)
Oxford Advanced Learner's Dictionary ထဲမှာကျတော့ ဒီလိုပြောထားပြန်တယ်ဗျ.
A hobby is an activity that you do for pleasure when you are not working.
(၀ါသနာဆိုတာ သင်အလုပ်မလုပ်နေချိန်မှာ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရစေဖို့ ပြုလုပ်တတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု တဲ့.)
ကဲ. နောက်ထပ် ကိန်းဘရစ်ခ်ျတွေ၊ ဟားဗာဒ်တွေ၊ ချူလာလောင်ကောင်တွေနဲ့ အကျယ်ချဲ့ပြီး မပြောချင်တော့ပါဘူး. ပြောစရာလည်း မလိုအပ်တော့ပါဘူး. ပြောဆိုရင်လည်း မပြောတတ်တော့ပါဘူး. :)
လိုရင်းချုပ်ရရင်တော့ ၀ါသနာဆိုတာ သင့်စိတ်ကို ကြည်လင်ပျော်ရွှင်စေဖို့ လေ့လာလိုက်စားတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ.
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် စကားလုံးနှစ်လုံးကို သတိထားပြီး သုံးသွားပါတယ်. "လေ့လာ" ဆိုတာနဲ့ "အလေ့အထ" ဆိုတာပါပဲ.
အလေ့အထ ဆိုတာ habit ပါ. ၀ါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့ အရာကို ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်. ဒါကြောင့် ၀ါသနာဟာ အလေ့အထတစ်ခုလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်. ဥပမာ စာရေးဝါသနာပါတဲ့သူဟာ နည်းနည်းလေးမအားလိုက်နဲ့ အားလိုက်တာနဲ့ စာရေးဖို့ကြိုးစားသလိုမျိုး.
လေ့လာ ဆိုတာကတော့ တစ်ချို့ဝါသနာကြီးသူတွေက သူတို့ ၀ါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို တစ်ခြားမည်သူမည်ဝါရဲ့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်မှ မပါဘဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လေ့လာလိုက်စားတတ်တာကို ဆိုလိုတာပါ. ဥပမာ. ဘလော့ဂင်းကို ၀ါသနာပါတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဟာ သူအားချိန်မှာ ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုဒ်ဒင်းတွေ လိုက်လံရှာဖွေ မှတ်သားလေ့လာတာမျိုး၊ တန်းပလိတ်တည်ဆောက်ပုံကို သူ့ဖာသာလေ့လာဆန်းစစ်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်. ကဗျာရေးရတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲပေါ့. ချဲ့ရင်တော့ ချဲ့သလိုရတာပေါ့ဗျာ.
ကျွန်တော်ဘာကြောင့် အဲလောက်ချဲ့ပြောရသလဲဆိုရင် ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံးကြားနေရတာတစ်ခုရှိပါတယ်. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခု ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပေါ့..
'ဟာ. ကျွန်တော် အဲဒီ့လိုင်းကို ၀ါသနာမပါဘူး.'
'ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာသင်ရတာကို ၀ါသနာပါလို့ ကျောင်းဆရာလုပ်တာ'
'ကျွန်မ သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါတယ်.'
အဲလိုမျိုး ကိုယ့်အတွင်းစိတ်က စေ့ဆော်လှုပ်ရှားနေတာမျိုး၊ အဲဒီ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရရင် အချိန်ကုန်လို့ ကုန်နေမှန်းမသိ ပျော်မွေ့နေတာမျိုး... အဲဒါကို ၀ါသနာလို့ ခေါ်ပါတယ်.
လက်တွေ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေဟာ ၀ါသနာနဲ့ နီးစပ်မှု တော်တော်လေး နည်းသွားပြီး အဆင်ပြေသလို ကျင်လည်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြရတာမျိုးတွေကိုလည်း အများကြီး ကြုံတွေ့ခံစားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်.
'ကျွန်တော် ပန်းချီဆွဲတာ ၀ါသနာပါတယ်. ဒါပေမယ့်ဗျာ. ကျွန်တော့်မှာ မ်ိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့. ဒီအလုပ်လေးကိုပဲ လက်မလွှတ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်. အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့တော့ ပန်းချီဆွဲတဲ့ဖက် ပြန်လှည့်ဦးမယ်ဗျာ...'
အဲလိုပြောတဲ့လူကို သတိထားကြည့်မိလိုက်တော့ အသက်က ၄၀ နား နီးနေပါပြီ။
'ဟေ့ကောင်... မင်း ၀ါသနာပါတာ ပါတာပဲ. အဲဒီ့ဟာနဲ့ ထမင်းစားလို့ရမတဲ့လား... လက်တွေ့ဆန်ဆန်စဉ်းစားစမ်းပါကွာ..'
အဲလိုမျိုး စေတနာရှေ့ထားပြီး ဖိနှိပ်ပြောဆို တားမြစ်ခံရတာမျိုးတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်.
ကျွန်တော် ခင်ဗျားကိုပဲ ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်တော့မယ်နော်.
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်ဝါသနာပါတာ ဘယ်ဟာလဲဆိုပြီး လေ့လာဆန်းစစ်သွားကြတာပေါ့...
ကျွန်တော် ၀ါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးအကြောင်းကို မသိခဲ့ဘူး. ကျွန်တော် ဘယ်ဟာကို လုပ်နေရရင် ပျော်တယ်ဆိုတာပဲ သိတယ်.
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေအကြောင်းကိုပဲ ရေးသွားတော့မယ်နော်.
(ဟူး... မောလိုက်တာ. အဲဒီ့စာကြောင်းလေးကို နားလည်ဖို့ အရှေ့မှာ အများကြီး ရှင်းပြခဲ့ရတယ်. :) )
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက စွန်လွှတ်တယ်. ဂျင်ပေါက်တယ်. ဂေါ်လီရိုက်တယ်. ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်တယ်. BMX စက်ဘီးလေးတွေ ငှားစီးတယ်. ဇယ်တောက်တယ်. ဘောလုံးကန်တယ်. အပြေးပြိုင်တယ်. သိုင်းချတမ်းကစားတယ်. စာစီစာကုံးဝင်ပြိုင်တယ်. အားကစားပြိုင်ပွဲတွေရှိရင် ၀င်ပါတယ်. ကဗျာရွတ်တယ်. သစ်ပင်တက်တယ်. ကြက်မွေးတယ်. ဘဲမွေးတယ်. ကားရုပ်လေးတွေကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်တတ်တယ်. ကိုရင်ဝတ်တုန်းက ဖားရိုက်ထွက်ရင်လိုက်တယ်. ခြင်းလုံးခတ်တယ်. အို.. အစုံပါပဲဗျာ.
ကျွန်တော်အစုံလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်. ၀ါသနာဆိုတာ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး. အဲဒါတွေလုပ်နေရရင် ကျွန်တော်ပျော်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲ သိတယ်.
လေးတန်းနှစ်လောက်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ကျွန်တော်သတိထားမိလာတယ်.
ငါးထပ်တိုက်ပေါ်ကနေ အောက်ကိုသွားဆင်းပြီး ဘောလုံးကန်ခါနီးမှာ ကျွန်တော့်မျက်စိရှေ့ ကာတွန်းစာအုပ်တစ်အုပ် ရောက်လာရင် မဆင်းတော့ဘဲ အဲဒီ့စာအုပ်ကို တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်ပစ်တယ်.
ကျွန်တော်ငိုနေရင် အဖေနဲ့ အမေက ကျွန်တော့်နားမှာ ကာတွန်းစာအုပ်လေးတစ်အုပ်နှစ်အုပ်လောက် မသိမသာလေး လာချပြီး ထွက်သွားတတ်တယ်. တအောင့်လောက်နေရင် ကျွန်တော် အငိုတိတ်ပြီး စာဖတ်နေတာကို သူတို့ ချောင်းကြည့်ရင်း ပြုံးနေတတ်ကြတယ်.
အဖေအ်ိပ်တဲ့ ဘုရားခန်းထဲမှာ စာအုပ်တွေစီထားတဲ့ စင်လေးတစ်ခုရှိတယ်. အဲဒီ့ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်နာမည်က ဗုဒ္ဓစာပန်းချီတဲ့... ရေးတဲ့သူက ငွေဥဒေါင်း (ဦးကြီးမောင်) ပါ... အဲဒီ့စာအုပ်လေးက ဘာသာရေးဗဟုသုတတွေကို ဇာတ်လမ်းလေးတွေပုံစံနဲ့ ရေးထားတာမို့ ဖတ်လို့ အတော်ကောင်းပါတယ်.
အဲဒီ့စာအုပ်ကို ကျွန်တော်ဖတ်မိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဘာသာရေးဗဟုသုတ အတော်လေးရလိုက်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှု အစပျိုးခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်. အခု ဒီပို့စ်လေးရေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖေကို ပြန်မြင်ယောင်လာမိတယ်.
အဖေဟာ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင် အမြဲပျိုးထောင်ပေးခဲ့တယ်. ၀န်ထမ်းလစာလေးနဲ့ လောက်ငှအောင်သုံးနေရပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘ၀တက်လမ်းအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် အရာတွေကို အကွက်ချလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်.
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အဖေ့ရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်က နတ်ကန်ရွာလေးကို သွားကြရပါတယ်. ဟိုရောက်ရင် ကိုရင်ဝတ်ပြီး စာဝါလိုက်ရပါတယ်. ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်တို့၊ ဘဂ၀ါ၊ အစိန္တေယျ ဘုရားရှိခိုးတို့၊ ဘောဒေ၀ပုတ္တ.. အိုနတ်သား... စတဲ့ ပါဠိတွေ၊ သုတ္တံတွေနဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်. အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ကိုရင်ဝတ်ရတာ ကျွန်တော် ၀ါသနာမပါပါဘူး. ဒါပေမယ့် ရွာပြန်ရတာကိုတော့ ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်.
မြို့ပေါ်မှာ ဘောလုံးကန်ဖို့ နေရာရှားသလောက် ရွာမှာနေရာက ပေါမှပေါ၊ ပြီးတော့ ရွာက သက်တူရွယ်တူကလေးတွေနဲ့ နပန်းပဲလုံးမလား၊ မန်ကျည်းပင်ကြီးအောက်မှာ ဘောလုံးကန်မလား၊ မန်ကျည်းစေ့တောက်မလား၊ ကျီးသားရိုက်မလား၊ သစ်ပင်တက်မလား၊ ဘောစကိုင်းသီးတွေ ခူးစားမလား၊ ညဖက် လူခြေတိတ်ချိန် သိမ်ကြီးထဲမှာထိုင်ပြီး သရဲအကြောင်းတွေပြောကြမလား၊ မိုးရွာရင် ကိုရင်ကြီးတွေနဲ့အတူတူ ဖားရိုက်ထွက်ကြမလား... အို ပျော်စရာကြီး...
အဲတာတွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဝါသနာလို့ ထင်ခဲ့တယ်.
ခြောက်တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု စစ်တွေမှာ ရှိနေခဲ့ကြတယ်. အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော် အတတ်ကောင်းတစ်ခု တတ်လာခဲ့တယ်. ဘာလဲဆိုတော့ သိုင်းဝတ္ထုဖတ်တာပါပဲ. :)
အဖေက ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ သိုင်းဝတ္ထုဖတ်တာကို တားမြစ်ပါတယ်. တွေ့ရင် စာအုပ်လွှင့်ပစ်ရင်လွှင့်ပစ်၊ ဆူရင်ဆူ၊ အဲဒါနဲ့မှ ပြောမရရင်တော့ ရိုက်ရင်ရိုက်တတ်ပါတယ်. အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော်လည်း သိုင်းစာအုပ်ကို မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ ငှားပြီးရင် ခါးကြားထဲထိုး၊ အကျီင်္နဲ့ဖုံး၊ အိမ်ဘေးနားက မာလကာပင်ကြီးကိုတွယ်တက်၊ ပြီးတော့ မာလကာကိုင်းကြီးကတဆင့် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ထိုင်ရင်း အဲဒီ့ပေါ်က သစ်ရိပ်အောက်မှာ မာလကာသီးခူးစားလိုက်၊ သိုင်းဝတ္ထုလေးဖတ်လိုက်နဲ့ လုပ်တတ်လာခဲ့ပါတယ်.
လမ်းမကြီးပေါ်က ဖြတ်သွားတဲ့ တစ်ချို့က မာလကာသီးလှမ်းတောင်းရင် ခူးပြီး လှမ်းပစ်တတ်ပါသေးတယ်. ဘေ့စ်ဘောပွဲတွေနဲ့ မရင်းနှီးခဲ့လို့. ကြည့်များကြည့်ခဲ့ဖူးရင် ဘေ့စ်ဘောသမားတောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်. :)
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်စာတွေကို ဖတ်ရတာ ၀ါသနာပါလာတယ်ဆိုတာပါပဲ. ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာတွေဟာ အကျိုးပြုလား၊ အပျော်ဖတ်လား၊ အညှီအဟောက်တွေလား အဲဒါတွေတော့ ကျွန်တော်မသိနိုင်၊ မခွဲခြားနိုင်ခဲ့သေးဘူး. ကျွန်တော်စာဖတ်ရတာကိုတော့ နှစ်ခြိုက်ခုံမင်လာတတ်ခဲ့တာ သေချာပါတယ်.
ပြီးတော့ ကျွန်တော် စာစီစာကုံးရေးရတာလည်း ၀ါသနာပါတယ်ဗျ. (ဒါကြောင့်လည်း ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေရေးရင် အက်ဆေးပုံစံတွေ တစ်ချုိ့ဖြစ်ကုန်တာနေမှာ. ဟတ်ဟတ်)
ခုနစ်တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ ဆုရခဲ့ဖူးတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအင်္ကျီကြီးကတော့ အခုအချိ်န်မှာ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ အရိုးစုလေးပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့ဦးမလားပဲ. အဖေက အမြဲအားပေးပါတယ်.
"ငါ့သား... ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသာ အဓိက... ပြိုင်သာပြိုင်... ဆုရရမရရ ပြိုင်ရဲတာကိုက သတ္တိတစ်မျိုးပဲ" တဲ့...
ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော် အဖေ့ကိုလွမ်းသွားပြီဗျာ....
ခုနစ်တန်းနှစ်မှာ အဖေဆုံးသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု မိတ္ထီလာကို ပြောင်းခဲ့ကြတယ်. ရှစ်တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော် မျက်နှာသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျောင်းသစ်ကို ပြောင်းခဲ့ရတယ်. အမျိုးသားနေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်. ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တယ်. ဆုရခဲ့တယ်. ဘာမှတော့ အထွေအထူးမဟုတ်ခဲ့ဘူး. ဗလာစာအုပ်အကြမ်းလေး တစ်ဒါဇင်နဲ့ စာရေးကိရိယာလေးတစ်ချို့ပါပဲ. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ဂုဏ်ယူခဲ့တယ်.
အဖေမရှိတော့မှ ကျွန်တော်ကို အားပေးချီးမြှောက်မယ့်သူဆိုတာ မရှိခဲ့တော့ဘူး. ကျွန်တော့်ဘ၀ကျွန်တော်စတင် ရင်ဆိုင်တတ်လာခဲ့ရတယ်. အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော်တုန်လှုပ်မိပါတယ်. ၀န်ခံပါတယ်. အဖေကို အရမ်းအရမ်းကို တမ်းတမိခဲ့ပါတယ်. အဖေမရှိခြင်းဟာ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ သိပ်ကို သိမ်ငယ်စေခဲ့တာမျိုးတွေ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်.
ဒါကြောင့် အဲဒီ့တုန်းက ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ... တတိယဆုလေးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ သိမ်ငယ်သွားခဲ့တဲ့ အားမာန်တွေကို ဟုန်းခနဲ ပြန်ထတောက်စေခဲ့တယ်.
ကျွန်တော် စာစီစာကုံးရေးတာကို တော်တော်လေး ၀ါသနာပါသွားပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်အခန်းထဲက စာအုပ်စင်လေးပေါ်မှာ စာစီစာကုံးရေးနည်းစာအုပ်လေးတွေ နေရာယူလာကြပါတယ်. အဲဒါနဲ့တဆက်တည်း ကျွန်တော် စကားပုံတွေ စုဆောင်းတာကို ၀ါသနာပါလာခဲ့တယ်.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာစီစာကုံးကောင်းကောင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ စာရေးကောင်းရုံတင်မကဘူး. သက်ဆိုင်ရာ အကိုးအကား စကားပုံ ဆိုရိုးစကားလေးတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ ညှပ်ထည့်ပေးရတတ်တယ်လေ. အဲဒါကြောင့် စကားပုံလေးတွေကို စုဆောင်းထားပြီးသား စာအုပ်လေးတွေကို ကျွန်တော် အချိန်ရရင် ဖတ်မှတ်တတ်လာတယ်. ကျက်သင့်ရင် ကျက်ပစ်လိုက်တယ်.
"သုစိပုဘာ၊ ၀ိလိသိဓာ၊ အက္ခရာစွဲသုံး၊ ဤရှစ်လုံးကို၊ သီကုံးပန်းသွင်၊ နေ့တိုင်းဆင်လော့..." တို့
"ပထမအရွယ်၊ ငယ်သော်ကတည့်၊ သိပ္ပခေါင်အား၊ တတ်မြောက်မြားမူ၊ တောသားရန်အောင်၊ ခြင်္သေ့ယောင်သို့၊ မရှောင်ပညာ၊ တင်းတင်းမာလိမ့်.."
"ဥစ္စာဟူသည် မျက်လှည့်မျိုး၊ ပညာဟူသည် မြတ်ရွှေအိုး.."
စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ.... အဲဒါလေးတွေကို နေရာတကျ ကျွန်တော်စီစဉ်စုဆောင်းထားတဲ့ မှတ်စုစာအုပ်လေးတွေ ရှိတယ်. လူတော်တော်များများ ဖတ်မှတ်လေ့လာခဲ့ဖူးကြမှာပါ. ဒါပေမယ့် စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားဖို့ကျတော့ လူတိုင်း သတိရချင်မှ ရလိမ့်မယ်. တကယ်လိုအပ်လို့ ထုတ်သုံးကြစတမ်းဆိုရင် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားခဲ့သူတစ်ယောက်က လိုသလို ထည့်သွင်းရေးသားရင်း စာဖတ်သူ စိတ်ဝင်စားအောင်ပိုဆွဲဆောင်နိုင်တာပေါ့.
အကျိုးတော်တော်လေးများခဲ့ပါတယ်. စကားပုံလေးတွေကို ဖတ်ရတာ မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း အများကြီး ပညာရည်ပြည့်ဝစေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ကြီးလေလေ ပိုနားလည်လေလေဖြစ်ခဲ့ရတယ်. တစ်ခါတစ်လေအဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုနဲ့ ကြုံကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့. အဲဒီ့မှာ..
'ဟာ... ဒီစကားလေး သိပ်မှန်တာပဲ' ဆိုပြီး ခေါင်းထဲမှာ လင်းခနဲ လက်ခနဲ ဖြစ်သွားရတာလေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်.
ဘလော့ဂ်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာလည်း ကျွန်တော် စုဆောင်းလေ့ကျက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စကားစုလေးတွေက သိပ်အသုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်.
အပေါ်က စကားပဲ ပြန်ကောက်လိုက်တော့မယ်ဗျာ.ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးတွေက အက်ဆေးပုံစံတွေများထွက်နေမလားမသိလို့.. ဟတ်ဟတ်
ကျွန်တော့်နာမည်ပါတဲ့ ဆုရစာစီစာကုံးများဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်ဖူးတယ်. ခုဆို ပြန်ရိုက်တာ စတုတ္တအကြိမ်မြောက်လားမသိဘူးဗျ. ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့တော့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီ. အရင်တုန်းက စာအုပ်တစ်ကြိမ်ပြန်ရိုက်တိုင်း စာမူခနဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင်စာအုပ်ပို့ပို့ပေးတတ်တယ်.
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပင်မ၀ါသနာကတော့ စာရေးခြင်းနဲ့ စာဖတ်ခြင်းပါပဲ. လောလောဆယ် မအားလပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် စာမရေးချင်မရေးဘူး. စာဖတ်တာကိုတော့ ရအောင်အချိန်ယူဖတ်နေဆဲပါပဲ.
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချရပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ မိသားစု အဆင်ပြေလှတယ်မဟုတ်ပါဘူး. အဖေမရှိဘူး. အမေက မှီခို. အစ်မငယ်က ၀န်ထမ်း. အစ်မကြီးကလည်း ၀န်ထမ်း. အစ်ကိုက ဒန်အိုးစက်ရုံမှာ လက်ထောက်မန်နေဂျာ. အားလုံး တစ်ဝမ်းတစ်ခါးလှအောင် မနည်းရုန်းကန်နေခဲ့ကြရတယ်.
ဆယ်တန်း results တွေထွက်ပြီးတော့ အားလုံးက ကျွန်တော့်ကို ဆရာဝန်လုပ်စေချင်တယ်.
အမေကလည်း ဆရာဝန်လုပ်စေချင်တယ်. အမျိုးထဲမှာ ဆရာဝန်ဆိုတာလည်း မရှိခဲ့ဖူးဘူးတဲ့. ပြီးတော့ ဆေးမှတ်မီရင် ဆရာဝန်လိုင်းလျှောက်ကြတာကိုက ဖက်ရှင်တစ်မျိုးလို ဖြစ်နေကြတယ်လေ.
ကျွန်တော် ဆရာဝန်လုပ်ရမှာ ၀ါသနာမပါဘူး. ဟုတ်တယ်. ကျွန်တော်ဝါသနာမပါတဲ့အရာတစ်ခုကို ဘ၀တစ်ခုလုံး ရင်းနှီးပြီး မလုပ်နိုင်ဘူး.
MIT ကို ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်. ၀ါသနာပါတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊ အထူးသဖြင့် Electrical Engineering ကိုလေ့လာဖို့..
အဲဒီ့မှာပဲ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက စစ်အင်ဂျင်နီယာလျှောက်ဖို့ အဖော်ညှိတယ်. အမေက လုပ်စေချင်ပြန်တယ်.
စစ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်ပါ စိတ်အေးရပြီပေါ့ဗျာ. မဟုတ်ရင် ကျောင်းတက်ဖို့ စရိတ်ကလည်း ကုန်ဦးမယ်. ပြီးတော့ ခေတ်စကားနဲ့ပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဗျာ. နော်. အရပ်ထဲမှာလည်း ဒီလိုပဲ ပြောနေကြတာမို့ပါ.
ကျွန်တော်အရေးပါအရာရောက်ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်စစ်ဗိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူး.
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် စစ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မြင်လို့မရဘူး..
အဲဒီ့မှာလည်း ကျွန်တော် ဒုတိယမ္ပိ တည်ငြိမ်စွာ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်.
'ကျွန်တော် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်. စစ်အင်ဂျင်နီယာတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး အမေ...'
ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်တွေ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတော်ကြီး ခေတ္တ (သို့) အကြာကြီး ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဂျပန်စာ စလေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်. ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာနဲ့ ဂျပန်ပညာတော်သင်လျှောက်နိုင်အောင်ပေါ့. Roll no. ကလည်း အိုကေ၊ Eligibility အရလည်း ဂွတ်၊ ဂျပန်စာပဲကျန်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်အသားကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်.
ဂျပန်စာအပေါ် ကျွန်တော်တော်တော်လေး သံယောဇဉ်ကြီးခဲ့ပါတယ်. ယုတ်စွအဆုံးဗျာ. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေရင်တောင် တစ်ရှုးပေပါပေါ်မှာ ခန်းဂျီးစာလုံးတွေ ရေးကျင့်နေတဲ့အထိ ကျွန်တော်လေ့ကျက်ခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်အစိုးရနဲ့ သဘောတူညီချက် ပျက်သွားခဲ့တယ်.
အတည်မပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ နအဖက စစ်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတော်သားတွေ ပုံစံဖမ်းပြီး ပညာတော်သင်လွှတ်နေတာကို ဂျပန်အစိုးရက သိသွားလို့တဲ့. Cancel လုပ်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့. အဲဒီ့ ပရိုဂရမ်မရှိတော့ဘူးတဲ့...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့ပရိုဂရမ် မရှိတော့တာကတော့ သေချာသွားခဲ့ပါတယ်.
ကျွန်တော့်မျက်စိရှေ့မှာ တိမ်စိုင်တွေပြိုကျသွားတာကမှ ကြည့်လို့ကောင်းခဲ့ဦးမယ်.
အခုတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးတစ်ခုလုံး အလဲထိုးခံလိုက်ခဲ့ရတယ်.
ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး. ကျောင်းဆက်တက်ချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး. စ်ိတ်တွေတော်တော်လေသွားခဲ့တယ်ဗျာ.
၂၀၀၁ မှာ ရန်ကုန်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်. ကွန်ပြူတာလေး ဟိုစမ်းစမ်းဒီစမ်းစမ်း၊ စပီကင်လည်း စမ်းတမ်းစမ်းတမ်းနဲ့ ကျွန်တော် ရည်မှန်းချက်ပျောက်သလိုဖြစ်နေခဲ့တယ်. မန္တလေးမှာ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေပြီကြားပေမယ့် ပြန်လည်းမတက်ချင်တော့ဘူး. ရန်ကုန်ကိုလည်း ကျောင်းမပြောင်းချင်တော့ဘူး. ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် MIT Dropout ဖြစ်ခဲ့ရတယ်.
၂၀၀၁ မှာပဲ ကျွန်တော် ပရိုဂရမ်မင်းဖက် ရောက်ခဲ့တယ်. ထုံးစံအတိုင်းပေါ့. အရူးအမူးကို လိုက်စားပစ်လိုက်ပြန်တယ်.
MySoft Technologies မှာ ခဏလုပ်တယ်. ပြီးတော့ ACE မှာ Instructor ပြန်လုပ်တယ်. ပရိုဂရမ်မာပဲ လုပ်တော့မယ်ပေါ့ဗျာ...
၂၀၀၂ မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း စင်ကာပူကို ထွက်သွားတယ်. ပိုလီကိုပေါ့. ကျွန်တော့်ရင်ထဲဟာသွားတာပဲ.
ကျွန်တော်က ပိုက်ဆံမရှိလို့ နိုင်ငံခြားဆိုတာကြီးနဲ့ မနီးစပ်နိုင်တော့ဘူးထင်နေခဲ့တာလေ. ပြီးတော့ ဘာသတင်းမှလည်းမရ. ဘယ်သူနဲ့မှလည်း မချိတ်ဆက်ခဲ့မိဘူးကိုး..
သူငယ်ချင်းကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ ဘ၀တူလို့ပြောရင်ရတယ်. Financial Aid နဲ့တက်တာကို သူရှင်းပြတော့ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့တယ်. ဒီလိုနဲ့ စင်ကာပူလိုင်းဖက် လိုက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်.
လေ့လာရင်းနဲ့ပဲ NTU/NUS ကိုလုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီး GCE A Level ကို စလေ့လာတယ်. အဲဒီ့မှာ အမေရိကား တက္ကသိုလ်က စကောလားရှစ်ရထားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ သိကျွမ်းမိရာက ကျွန်တော် လမ်းကြောင်းတွေ စသိလာခဲ့တယ်.
ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော် ၀ါသနာအရရော ၀မ်းရေးအရရော လုပ်နေခဲ့တာတစ်ခု ပြောပြဖို့ မေ့သွားတယ်.
ဆယ်တန်း၊ ကိုးတန်းတွေသာမကဘူး. TOEFL, FCE နဲ့ Eng. Grammar ကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်ဝိုင်းလေးတွေ ဖွဲ့ပြီးသင်တယ်. ကျွန်တော်စာသင်ရတာကို သဘောကျပါတယ်. ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀ါသနာအပါဆုံးအရာတွေထဲမှာ စာသင်ရတာလည်း ထိပ်ဆုံးမှာပါနေမယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်.
Guide ပြရင်း ပိုက်ဆံစု၊ အားလပ်ချိန်မှာ TOEFl, SAT လေ့လာ၊ စာမေးပွဲတွေအတွက် ပြင်ဆင်၊ ကျောင်းတွေရှာ၊ ကျောင်းတွေလျှောက်နဲ့ တော်တော်လုပ်ယူခဲ့ရပါတယ်. တစ်ချို့တွေများ အဆင်ပြေလိုက်တာဗျာ. ကျွန်တော်ကတော့ သင်တန်းတက်ရင် ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့ စာအုပ်တွေ မိတ္တူဆွဲပြီး အိမ်မှာပဲ လေ့လာဖြစ်ခဲ့ရတယ်. Result တွေလည်းထွက်ပြီးရော ကျွန်တော် TOEFL ကို သင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်သင်နိုင်ခဲ့တယ်. စာမေးပွဲကြေးကြေရုံတင်မကဘူး. အမြတ်ပါထွက်လိုက်သေးတယ်. :)
ကျောင်းကိစ္စတွေလုပ်နေရင်း စာသင်လိုက်၊ စာသင်ရင်း ကျောင်းကိစ္စတွေလုပ်လိုက်နဲ့ ၂၀၀၄ မှာ ကျွန်တော် စကောလားရှစ်ရပြီး ဒီကိုရောက်လာခဲ့တယ်.
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယမ္ပိ ၀ါသနာကတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက ဖီလင်မလာတဲ့ အရာတစ်ခုကို အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လောက်များနေပါစေ. ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူး ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ ငွေကြေးအရ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်ရွေးချယ်လုပ်တတ်ပါတယ်.
ဘာအကန့်အသတ်မှ လောလောဆယ် မရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် စာသင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်. လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ အကန့်အသတ်တွေ၊ တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိနေလို့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေဆဲပဲဗျ. ဒါကြောင့် ဘလော့ဂ်ပေါ်ကနေပဲ ဆရာလုပ်နေရတော့တယ်. အဟတ်ဟတ်..
ကျွန်တော့်မှာ တကယ်တော့ ရေးပြစရာ သိပ်မရှိလှပါဘူး. ဒါပေမယ့် အဲလိုပြောရင်းနဲ့ ရေးနေတာကိုက တော်တော်ရှည်သွားပြီ.
၀ါသနာဆိုတာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်နေရင် သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်. ကျွန်တော်အားကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်.
Apple Company က Steve Jobs
Berkshire Hathaway Inc. က Warren Buffet
Bluelithium Company ကို ထောင်ခဲ့တဲ့ Gurbaksh Chahal
မယ်တော်ဆေးခန်းကို ထူထောင်ထားပြီး ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်
United States ရဲ့ လက်ရှိသမ္မတ Barack Obama
သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေကို ကျွန်တော်လေးစားတယ်. အားကျတယ်. အတုယူမိတယ်.
သူတို့ထက်အောင်မြင်သူတွေ၊ သူတို့လိုပဲ အောင်မြင်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့် သူတို့တွေလောက် လဲကျရာကနေ ပြန်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ကဲ့ရဲ့စကားတင်းဆိုမှုတွေကို အပြုံးမပျက် ရင်ဆိုင်ရင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို အရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဟုတ်ခဲ့ကြဘူး.
ကျွန်တော်အတိအကျမသိနိုင်တဲ့၊ မသိနိုင်သေးတဲ့ တစ်ခြား ထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ရှိပါသေးတယ်.
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သူတို့ကို လေးစားအားကျရတာကတော့ သူတို့ဝါသနာပါတာကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်. ထိပ်ဆုံးကိုရောက်အောင်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ.
ကျွန်တော် စာသင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်.
ကျွန်တော် လူတွေရဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကို ကူညီနှစ်သိမ့်ပေးချင်တဲ့ တရားဟော ဓမ္မဆရာတစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်.
ကျွန်တော် ကမ္ဘာလှည့်ပြီး မငြိမ်းချမ်းမှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်တစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်.
ဒါတွေဟာ တကယ်ပဲ ၀ါသနာပါတာလား. မခံချင်စိတ်နဲ့ စေ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေလား. သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာချင်တဲ့ အတ္တစိတ်ရိုင်းတွေကြောင့်ပဲလား. ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တရားမျှတမှုရဲ့ ခန္ဓာအငှားချမှုတွေပဲလား....
ဒါတွေကို ကျွန်တော်ဆက်လက်စဉ်းစား ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲမှာ ကျွန်တော် တစ်စုံတစ်ရာကို ပြင်းပြင်းပျပျ ခံစားမိနေတယ်.